Cayaaraha Olympic Oo La Nacay
Ceerigaabo, 19 Jan 2015 (Alldhooftinle.com)
Waa La Naadinayaa Oo Magaalo Lagu Qabto Iyo Cid Aqbashaa La La'yahay Tartanka Cayaaraha Olombiga Jiilaalka 2022 ka.
Waxaynu wax badan maqalay in dhowr magaalo ku tartamaan in lagu qabto Cayaaraha Olympic, ka dibna magaaladii ku guuleysata lagu qabto ciyaaraha.
Waqtigaa waa laga soo gudbay, waxaa la naadinayaa oo cid aqbasha la la'yahay tartanka Cayaaraha Olombiga jiilaalka ee 2022. Magaalooyinka Oslo (Norway), Stockholm (Sweden), iyo Munich oo Jarmalka ah ayaa la noqday codsigii ay hore u dalbadeen in lagu qabto ciyaarahaa.
Krakow oo Poland ah iyo Lviv oo Iswiisarland ah ayaa iyana sheegay inay ka noqdeen codsigoodii ahaa inay marti geliyaan. Labada magaalo ee soo hadhay oo ah Al maty oo Kazakhastan ah iyo beijing oo Shiinaha ah ayaa ilaa hadda ka hadhay wadamadii doonayey inay tartankaa qabtaan.
Hadaba maxay tahay sababta loo diidey ciyaaraha waa tii loo dagaalami jireye. Xaqiiqdii ayaa la ogaaday, ugu horeyn waxaa beenoowday lacagta iyo kharashka ku baxa ciyaarahaa in tikidhada laga heli doono. Ciyaarihi ugu danbeeyey ee Brazil lagu qabtay iyo Kii Sochi oo Ruushka ah ka dhacay baa cadeeyey in dad badani door bidaan inay bilaash TV uga daawadaan intay garoonka lacag ku geli lahaayeen.
Arinta labaad oo ahayd in magaaladaa ay cirka mari doonto oo dad badani iman doonaan ciyaaraha ka dib ayaa iyana meesha ka baxday. Magaalada Athens ee Giriiga oo sanadkii 2004 lagu qabtay Olambiga bisad xitaa ma soo booqan ciyaaraha ka dib, sida uu sheegay wasiirkii hore ee maaliyada Giriiga oo aad uga soo hor jeeday in ciyaaraha lagu qabto Giriiga.
Ciyaarihii lagu qabtay Shiinaha 2008 waxaa ku baxay 43 Bilyan oo doolar, kuwa Ruushka lagu qabtayna waxaa ku baxay 51 Bilyan. Sidaa darteed ma jiro dal xiisaynaya inuu ku khamaaro lacag intaa le'eg, marka laga reebo wadamada carabta sida Qadar oo lacag badan ku bixisay si ay u marti geliso koobka aduunka ee 2022 la qaban doono.